Muxuu ahaa ujeedka kulanka James Swan uu la yeeshay Shariif iyo Xasan Sheekh - Caasimada Online
Home Warar Muxuu ahaa ujeedka kulanka James Swan uu la yeeshay Shariif iyo Xasan...
Muxuu ahaa ujeedka kulanka James Swan uu la yeeshay Shariif iyo Xasan Sheekh
Muqdisho (Caasimada Online) – Hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan.
Kulankaas maanta dhex maray James Swan iyo hogaanka Madasha ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka, caqabadaha ku hor gudban iyo kaalinta axsaabta dalka ay ku leeyihiin sidi loo qaban lahaa doorasho waqtigeeda ku qabsoonta, taas oo lagu wada qanacsanyahay.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa war-saxaafadeed maanta ka soo baxay waxa ay uga hadleen arrimaha doorashada dalka, waxay ku sheegeen inay walaac badan ka qabaan sababta ay madaxda dowladdu uga cagajiidayaan qabashada doorasho waqtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu yahay.
Sidoo kale Madasha ayaa war-saxaafadeedkaas ugu baaqday baarlamaanka in aysan ansixin xeerarkii uu soo gudbiyey guddiga wadajirka ah ee ku saabsan doorashooyinka, si aysan deegaanada dalka ugu horseedin khalalaase iyo deganaansho la’aan, kuwaas oo xalinteedu adkaan doonto, sida lagu yiri qoralka.
Madasha Xisbiyadda Qaran ayaa sidoo kale qoraalkii maanta ku sheegtay in hoggaanka dowladda federaalka uu ku fashilmay qabashada doorasho qof iyo cod ah, isla markaana loo baahan yahay in laga tashado.